Qodobbada Noogu Dhawaaqa Cunsurrada Muhiimka ah si aad u tixgeliso marka la sameynayo Istaraatiijiyada SEO
Search Engine Optimization (SEO) wuxuu muhiim u yahay ujeedooyinka suuq-geynta.Istaraatiijiyada SEO ayaa ujeedadeedu tahay horumarinta gaadiidka macaamiisha iyada oo loo marayo waddooyinka kala duwan Waa habka suuq-geynta casriga ah ee isticmaala internetkamareegaha si loo soo jiito loona ilaaliyo macaamiisha. SEO wuxuu kordhiyaa aragtida shirkadda / calaamadda iyadoo la tixgelinayo sare ee mashiinka raadintanatiijooyinka.
SEO ma aha xal xaalad ah laakiin habka firfircoon sida ugu dhakhsaha badan ee la xidhiidhain habdhaqanka macaamiisha iyo isbedelka tiknoolajiyada macluumaadka - gislaved nord frost ?????????????. Ganacsiyada ujeedadoodu tahay inay muujiyaan kartidooda buuxdakobcinta habka kormeerka iyo nidaamka raadraaca marka lagu daro istaraatiijiyada SEO.
Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare ,Jack Miller wuxuu sharxayaa qodobo muhiim ah oo aad u baahan tahay in aad tixgeliso markaad qorsheyneyso, hirgelinayso iyo qiimeynta istaraatiijiyada SEO
1. Fahminta Suuqa Sargaalka
SEO wuxuu ku siinayaa waxtar dheeraad ah marka loo eego hagaajinta gaadiidka macaamiisha. Waawaxay u suurtagelisaa ganacsiyada inay soo qabato dareenka macaamiisha iman kara. Khabiirada SEO waa in ay fahmaan sifooyinka dadka ee dadkoodabartilmaameedka dadweynaha. Google Analytics waa qalab internet oo muhiim ah oo caawin kara khabiirada SEO si loo aqoonsado sifooyinka muhiimka ah ee la doonayosaldhigga macaamiisha
2. Waxtarka waxtarka suuqyada gacanta
Tirada dadka macaamiisha leh telefoonada smart waa sii kordhayadegdeg ah. Waxay gaadhay dadweynaha macaamiisha kuwaas oo isticmaala kombiyuutarada casriga iyo laptop-ka. Dad badan ayaa galaan internetka iyo bulshadawarbaahinta iyagoo isticmaalaya telefoonnada gacanta. Khabiir SEO ah waa inuu hubiyaa in website-ka shirkadda laga heli karo si fudud iyada oo loo marayo telefoonka gacanta. GoogleTest Mobile-Friendly Test wuxuu bixiyaa saameyn wax ku ool ah ee tayada bogga internetka ee telefoonada gacanta
3. Ballaarinta Gawaarida Muuqaalada
Mashiinka raadinta ee ugu muhiimsan waa Google. Macaamiisha badan waxay isticmaalaan googlesi kor loogu qaado barta internetka. Horumarinta tiknoolajiyada ayaa kordhay awoodda Google ee dhinacyada xawaaraynta, caddayntamacluumaadka, iyo mugga shabakadaha. Isla mar ahaantaana, waxaa jira matooro raadin oo kala duwan suuqa. Tusaale ahaan, Yahoo waa aasaaskasearch engine of Firefox. DuckDuckGo waa mashiinka raadinta oo kale oo ka hela macaamiisha dhexdooda.
4. Isticmaalka-isticmaalka Website-ka
Websaydhku waa inuu leeyahay mawduuc cad, kaas oo lagu farsameeyo ahab ku habboon. Dhammaan sawirada iyo fiidiyowyada waa inay muuqdaan, la sharraxay oo lala xiriiriyaa. Macluumaadka qoraalka ah waa inuu ahaadaa mid sax ah oo naxwe ahaan lehsax. Ereyada muhiimka ah ee SEO waa inay ahaataa mid ku haboon geeddi-socodka ganacsiga. Bogga internet-ka ah ayaa u sahlan in la raaco, markaa qaabeyntaadabogagga bogguna waa muhiim. Hubi inaad haysatid iskudubarid iskuxiran.
5. Isticmaalida Xiriirada Tayada
Xidhiidhka ka dhexeeya boggaga internetka, oo horseedaya boggaagawaxay abuuraan taraafikooyin dheeraad ah. Websaydhka shirkadda, sidaas awgeed, waxay ka helaysaa dad badan oo ka socda goobaha internetka lagu beegsado. Gaadiidka gudbinta wanaagsanwaxay hagaajineysaa astaanta shirkadda iyo tirada macaamiisha mustaqbalka. Dhanka kale, xiriirada laga mamnuucay mashiinka raadintaWebsaydhku wuxuu hoos u dhigi karaa darajada boggaaga. Sidaa darteed fiiro gaar ah ilaha xiriirka soo galaya oo doorta goobo sax ah oo toos loogu diro dibaddaisku xirka.
6. Awoodda Warbaahinta Bulshada
Nidaamka warbaahinta bulshada ayaa ku siinaya kala duwanaanshaha awooddaaaladaha suuq-geynta suuqa. Isticmaalayaasha bogga intarnetka iyada oo loo marayo xidhiidhada ay bixiyaan warbaahinta bulshada ee ganacsiga. Shirkadaha waa inayhorumarinta joogitaanka ku haboon ee warbaahinta bulshada si kor loogu qaado wacyigelinta gaadiidka iyo wacyigelinta caanka ah.
7. Korjoogteynta iyo Raadinta
Waa muhiim in la fahmo sida xeeladaha SEO ay u shaqeynayaan. GoogleQalabka falanqaynta ayaa lagama maarmaan u ah dib-u-eegista wax-ku-oolnimada istaraatiijiyada SEO marka la eego kordhinta tirada taraafikada. Dhinaca kale,kormeer joogta ah ee waxqabadka boggaga ayaa kaa caawin doona inaad garato sababaha, taas oo horseedi karta hoos u dhaca gaadiidka, isla markiibaway muuqdaan.
Heerka sare ee bogga ganacsiga ee internetka wuxuu kordhiyaa aragtidaiyo gaadiidka macaamiisha. Ka hor 2015, SEO ayaa ku lug leh faahfaahinta ereyada muhiimka ah ee website-yada si loo hubiyo in si dhakhso ah loo ogaado baaritaankamashiinnada Meelaha ganacsiga ee hadda jira, SEO waa mid aad u badan oo waa in lagu daraa istaraatiijiyada suuq-geynta digital-ka ahganacsiga khabiiro SEO ah oo khibrad leh iyo khabiiro suuqgeyn suuq-gareeyo, kuwaas oo aad kireeysan kartid adoo adeegsanaya Bixiyeyaasha adeegyada SEO